ပို့စ်တင်ချိန် - 3/22/2014 11:59:00 AM
မြန်မာပြည်မှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဟာ တရားမ၀င်ပါဘူး။ ပြည့်တန်ဆာအိမ်တစ်အိမ်ကို ၀င်ဖမ်းတဲ့ အခါ ပြည့်တန်ဆာ တွေသာ အဖမ်းခံရပြီး လိင်ဆက်ဆံသူကတော့ အဖမ်းမခံရပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါ အိမ်ပိုင်ရှင်တောင် အဖမ်းမခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လိင်အလုပ်သမတွေဟာ ရဲတွေရဲ့လက်မှာ မတရားပြုမှုတွေကို ခံရလေ့ ရှိတတ်ပါတယ် . . .
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ ဘီယာဆိုင်ကြီး တစ်ဆိုင်ဟာ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ အသက်ဝင် လှုပ်ရှားနေတယ်။ မလုံ့ တလုံ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်လာတဲ့ မိန်းမပျို နှစ်ဒါဇင်လောက်ဟာ စင်ပေါ်မှာ စီတန်းပြီး ဆံပင်တွေ ဝှေ့ယမ်း လို့ ပြင်းပြင်းရှရှ ပေါ့ပ်သီချင်း တစ်ပုဒ်ရဲ့ တေးသွားနဲ့ အတူ စည်းချက်ညီ ကနေကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသား အနည်း ငယ်နဲ့ မြန်မာအမျိုးသား အများစုကတော့ စင်အောက်က ၀ိုင်းတွေမှာ Tiger ဘီယာကို မြုံ့ရင်း စင်ပေါ်က မြင်ကွင်းကို အမြည်းလုပ်နေ ကြတယ်။ တချို့က လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ စင်ပေါ်ကို ဗီဒီယိုလှမ်းရိုက်လို့။
ကြည့်နေရင်းမှာပဲ ပရိသတ်ထဲက ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၁၂ ဒေါ်လာတန်တဲ့ ပန်းကုံးတစ်ကုံးကို စားပွဲထိုးက တစ်ဆင့် စွပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။…
ကမ္ဘာ့လိင်အပျော် ခရီးသွားမြို့တွေထဲက တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ဗန်ကောက်က လိင်အသားပေးဆန်တဲ့ ဖော်ချွတ်ရှိုး ပွဲတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ မော်ဒယ်လ် ရှိုးလို့ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန်က ရှိုးပွဲတွေဟာ ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ် တွေများစွာ အထီးကျန်ဆန် စွာ နေခဲ့ရပေမယ့် နောင်လာ မယ့်နှစ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်း အ၀ိုင်းထဲကို ၀င်ဆံ့ ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ပုံ တစ်ပင် နဲ့ပါ။ အဲဒီကာလတွေမှာ တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိလာမယ့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မော်ဒယ်လ်ရှိုးပွဲတွေရဲ့ အ နာဂတ်ဟာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို မြန်မာအရာရှိတွေနဲ့ လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့တွေက ကြိုတင်စိုး ရိမ် ပူပန်နေ ကြပါတယ်။
၂၀၁၁ မှာ ကမ်္ဘာလှည့်ခရီးသည် ရှစ်သိန်းကျော်(၈၁၆၀၀၀) လာရောက်ရာ ကနေ ၂၀၁၂ မှာ ခရီးသည် ဆယ်သိန်း ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ မှာတော့ ကမ်္ဘာလှည့်ခရီးသည် ဆယ့်ငါးသိန်းကျော် ၀င်ရောက်နိုင် တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါ တယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ အရင်နှစ် တွေထက် ၀င်ငွေပိုမိုတိုးလာပေမယ့် သက် ဆိုင်ရာဟာ ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ အစီအစဉ်ထဲမှာ လိင်လုပ်ငန်းကို ပါစေချင် ပုံမရပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေထဲက ထိုင်းနိုင်ငံဟာ အာဆီယံမှာ HIV ကူးစက်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ ပြီး ကမ္ဘောဒီးယား ဆိုရင်လည်း အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကို အသုံးပြုပြီး လိင်လုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားရှာရာမှာ နာမည် အလွန် ကြီးနေလို့ပါပဲ။
မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း နှစ်ပေါင်းတာရှည် အမြစ်တွယ်နေခဲ့တဲ့ လူကုန်ကူးမှု လုပ်ငန်းကြီး ဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ရောက်နေ ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီး ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲက လိင်ဝန် ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေဆီ ချောင်းပေါက် သလို ရောက်နေခဲ့တယ်။ အများစုကတော့ ကိုယ့်အလိုဆန္ဒနဲ့သွား ရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ် လို့ စောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့တွေက ဆိုကြတယ်။
““မိန်းကလေးငယ်တွေဟာ အသက် မပြည့်၊ ငယ်ရွယ်သူတွေ များတယ်။ သူတို့ ရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကို ဈေးကောင်း ကောင်းရရင် ရောင်းချလိုက်ဖို့ သူတို့ ၀န်မလေးဘူး။ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က အသိပညာနည်း ပါးတော့ ဘာဖြစ် မယ်မှန်း သိသိကြီးနဲ့ဒါကို လက်ခံနေကြတယ်။ လက်မခံရင်လည်း အဲဒီမိဘတွေကို ဘယ်သူတွေက ရှာကျွေး ပြီး အထောက်အပံ့ပေးမှာလဲ ဆိုတာမေးစရာ ဖြစ်နေပြီ””လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီ (UNLAP) ရဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်အရာရှိက ပြောပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် လူ့အသက်ပေါင်း များစွာ ပျက်စီးခဲ့သလို ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေထဲက အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေလည်း ဘ၀ပျက်စီးကိန်း ဆိုက်ခဲ့ တယ်။ ၂၀၀၈ နာဂစ် အလွန်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က တက်လာ တဲ့ အမျိုးသမီးငယ် မြောက်မြားစွာကြောင့် ရန်ကုန် လို မြို့ကြီးတွေရဲ့ ကာရာအိုကေ၊ အနှိပ်ခန်းနဲ့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေမှာ လိင်အလုပ်သမဦးရေ သိသိ သာသာ တိုးပွားလာတယ်လို့ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရှိခဲ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေကို လိင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ပေါ်ပေါ် တင်တင် များများ စားစား မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါကလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားခရီး သွား ၂၂ သန်း လာရောက် လည်ပတ်တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာမှာတော့ နိုင်ငံခြားခရီး သည်ဟာ အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းပါး နေသေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာရင် ဒါဟာပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာ ဧကန်ပါ။
““မကြာသေးခင်က ကျွန်မဂျပန်နိုင်ငံက လိင်အပျော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို အမှတ်မထင် သွားတွေ့ခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်စာရင်းနဲ့တကွ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုချင်း စီရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်တာကိုပါ ထည့်ပြီး ကြော်ငြာထားတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့် သည်တွေက တောင်းဆိုရင် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်က ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးပြီး လိင်ကိစ္စကို ၀န်ဆောင်မှုပေးတယ်”” လို့ မြန်မာပြည် Tourism Transparency တည်ထောင်သူ Andrea Valentinရဲ့ က ပြောပါတယ်။
““ပြဿနာတချို့ရှိပေမယ့် ဟိုတယ် ဆိုတာ ခရီးသွားတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးချင်တယ်။ ငါတို့ဘာ လုပ်ရမလဲ””လို့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေက ပြောပါသေးတယ်။
““မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မော်ဒယ်လ်ရှိုးတွေ၊ ကာရာအိုကေနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေမှာ လိင်ကိစ္စကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် သွားတောင်း ဆိုလို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ အဲဒီမှာရတယ်။ သိုသိုဝှက်ဝှက်ပေါ့””လို့ UNLAP ရဲ့ အရာရှိက ပြောပါတယ်။
““သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ပြဖို့တော့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ ဘယ် ကာရာအိုကေ ကရတယ်။ ဘယ်ကာရာအိုကေက မရဘူးဆိုတာကို သိနေကြတယ်။ တချို့ တက္ကစီကား မောင်းတဲ့ သူတွေပါ ဒါကိုသိ ကြတယ်””လို့ သူမက ဆက်လက်ပြောဆို ပါတယ်။
မကြာသေးခင်နှစ်ကလည်း ကမ္ဘာလှည့်နိုင်ငံခြားသား ၁၃ ယောက်ကို အရွယ် မရောက်သေးသူ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားမှု (Child Sex) နဲ့ မြန်မာပြည်ကနေနှင် ထုတ်ပြီး အမည်မည်းစာရင်း သွင်းလိုက်ရပါသေးတယ်။ ကမ္ဘော ဒီးယားမှာတော့ ဒီကိစ္စ (Child Sex) ကအဆိုးဆုံးပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအစိုးရပိုင်းကတော့ အနာဂတ်ကို ကြိုတွေးပြီး စိုးရိမ်နေပုံရပါတယ်။
““အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက သင်ခန်းစာကိုယူပြီး နောင်မှဆိုတာထက် အခုလက်ငင်း ချက်ချင်း ကျွန်တော်တို့ စတင်ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရတော့မယ်””လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးတစ် ယောက်က ပြောဆိုပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေဘက်က လုပ်ဆောင် မှုတစ်ခုကတော့ ဟိုတယ်၊ ခရီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဂျာမန် NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hanns Seida ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပေါ်လစီတစ်ခုကို စတင် ရေးဆွဲခဲ့တာပါပဲ။ နိုင်ငံ ခြားသား ခရီးသည် တွေကို ရည်ရွယ်ပြီး လိုက်နာရမယ့် စည်း မျဉ်းတချို့ကိုဟိုတယ်နဲ့ အေဂျင်စီတွေကို လိုက် လံဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။
နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဆိုရင်လည်း အစိုးရ တွေအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အထူးအစီ အမံရေးဆွဲပြီး (Sex Tourism) နဲ့ ပတ်သက် လို့ လူထုကို ပညာပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ ကို ပြုလုပ် နေပါတယ်။ UNLAP အနေနဲ့ ကတော့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေ၊ ခရီးသွား အေးဂျင့်တွေကို Sex Tourism နဲ့ပတ် သက်လို့ ဘယ်လိုသတိထား ဂရုပြုလေ့လာရ မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျင်းပပေးနေပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှု ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အရွယ်မရောက်သူ လိင်ဆက်ဆံမှု ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ တွေရဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကို နိုင်ငံခြားခရီးသွား အများစုရှိရာ နေရာတွေမှာ အလွယ်တကူထားရှိပေးပါ တယ်။
““ဥပဒေတွေ၊ ခရီးသွားအစီအမံတွေ ဘယ်လိုပဲရှိနေနေ ကိုင်တွယ်စီမံမှုအပိုင်းမှာ လျော့ရဲနေရင်တော့ ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းဟာ တရားမ၀င်ပါဘူး။ ပြည့်တန် ဆာ အိမ်တစ် အိမ်ကို ၀င်ဖမ်းတဲ့အခါ ပြည့်တန်ဆာတွေသာ အဖမ်းခံရပြီး လိင်ဆက်ဆံသူကတော့ အဖမ်းမခံရပါဘူး။ (အကြောင်း ကြောင်းကြောင့်) ရံဖန်ရံခါ အိမ်ပိုင်ရှင်တောင် အဖမ်းမခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ် မျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လိင်အလုပ်သမ တွေဟာ ရဲတွေရဲ့လက်မှာ မတရားပြုမှု တွေကို ခံရလေ့ရှိတတ်ပါတယ်””လို့ UNLAP အရာ ရှိက ပြောပါတယ်”” ယူနီ ဆက်နဲ့ NGO တွေက ဒီကိစ်္စမျိုးတွေမှာ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ရဲအရာ ရှိတွေကို သင်တန်းပေးဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ”” လို့ သူမက ထပ်လောင်းပြောဆိုပါတယ်။
““စိန်ခေါ်မှုတွေ ဘယ်လိုရှိနေပေမယ့် လည်း မြန်မာအနေနဲ့ကတော့ ထိုင်းတို့၊ ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ လိင်အပျော်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျိန်စာက လွတ်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်””လို့ Tourism Transparency အကြီးအကဲ Valentin က အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ဆိုပါတယ်။
““နှစ်ခြောက်ဆယ်လောက်တံခါးပိတ် ထားတဲ့နိုင်ငံဟာ အခုဆိုပွင့်လင်းလာပြီဖြစ် တဲ့အတွက် ဒီအရာတွေကို လွန်မြောက်ဖို့ သင်ယူနေပါပြီ။ ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ ဒီပြဿနာမျိုး ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အထောက် အပံ့တွေပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်””
Ref: Can Burma Avoid the curse of sex tourism? By Justin Bergman
သမ္မတကတော် Michelle Obama ပီကင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားေ...
သူနဲ့ စေ့စပ်ပြီးတဲ့အခါ သင်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသွား...
ရင်သားကြီးအောင်လို့ Vaseline အဆီထိုးထည့်ပြီးနောက် ...
အဖေပဲ မှားပါတယ် သားရယ်..
ရခိုင် လစ်လပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ နေရာ ANP ပါဝင်...
ဘူးသီးတောင်နယ် ရှင်ပြုပွဲ တစ်ခုတွင် ဓါးထိုးမူ ဖြစ်...
ကယ်ရီမောင်းသူထံမှ ဆိုင်ကယ်ကို ခရီးသည်များမှလုယက်
ပုခက်အတွင်းသိပ်ထားသည့် ကလေးငယ် ရေစည်ပိုင်းအတွင်းပြ...
ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် ရေသောက်ရန်ရေဗူးယူရာက ယာဉ်တိမ်း...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဒုတိယ အကြိမ် ပြုလုပ်မည်
တိုးမြှင့်မီတာခလား၊ သယံဇာတ ကျိန်စာလား
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အန္တရာယ် သတိပေး နှိုးဆော်
မန္တလေး အိုးဘိုထောင် မီးလောင်
ခရိုင်းမီးယားဒေသ ယူကရိန်းနိုင်ငံက ခွဲထွက်ပြီး ရုရှ...
၁၃ နှစ် ကျောင်းသူနဲ့ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး အွန်လိုင်း တ...
တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ 68 Residence – စည်သူအောင်မြင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၅ဝစ...
လေယာဉ်ပေါ်မှာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်း သယ်သွားကြောင်း မလေးရ...
ရန်ကုန်သင်္ကြန်နှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး – ၀တ်ရည်နွေးနွေး
ဖခင်ရဲ့ ချစ်စနိုးနဲ့ နမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ က...
တောင်ကြီးမြို့၌ ကျောင်းသားတစ်စု ဆိုင်ကယ်တိုက်ခံရမှု...
အပိုင်းအစတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နေရာကို ရှာဖွေရေးလေယာဉ် ၆ စ...
I Am What I Read "တဲ့ ။ ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေက ကု...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မီးရှို့သတ်သေမှု တောင်ငူတွင်ဖြစ်ပွား
အသက်အန္တရယ်ကို ထွေးပွေ့လို့ ရင်ဆိုင်သော အမေရိကန် ကေ...
ဘ၀ကို ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင် သင်ဟာ ဒီအရာ (၁၀)ခ...
မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို ချစ်ကြည်ရေး သံဃာအပါး ၁ သောင်...
LG နဲ့ Samsung ဖုန်းတွေကို အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် သံ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ဗုံး ၄ လုံး ပေါက်ကွဲ
အိမ်ထောင်မပြုသောအမျိုးသမီးများ နှလုံးရောဂါဖြင့် သေ...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ သန်းခေါင်စာရင်း အကောက်မခံဘ...
အဝေးပြေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ လေယာဉ်ကွင်း
NLD နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး တိုင်းရင်းသားဒေသအားလုံးမှာ ယှ...
အကျိတ်အရွယ်အစားကို ဆရာဝန်တွေက ပိုတွက်မိလို့ မလိုအပ...
ဘာဘီကျူ့(BARBEQUE) အသားတုတ်ထိုး ရောင်းနေတဲ့ ကင်ဂျု...
ပေါက်မြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၂၄) ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း စက်ရုံ...
ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ အစိုးရ၀န်ထမ်းများအား လစာ ကျပ်နှစ်သေ...
မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်း အနေဖြင့် Dee...
လေယာဉ်ပျောက် ရှာဖွေနေတဲ့ အမေရိကန် စစ်လေယာဉ်ပေါ်က သတ...
တူရကီမှာ Twitter ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန် တိုက်တွန်း
စစ်တွေနှင့် မောင်တောကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ထည့်...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန် အရက်၊ ဘီယာရောင...
သင်္ကြန်တွင်း ၌ အဓိက ငါးနေရာ တွင် စက်ပျက်ယာဉ်၊ ပိတ်ဆ...
ဆီးဂိမ်း အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ မှ ယွမ်ငွေ သန်း (၂၀၀)ေ...
Fortune မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြီးမြတ်ဆုံးခေါင်းဆောင် ...
ရိုဟင်ဂျာအမည် ထည့်သွင်းရေး ဗြိတိန်သံအမတ် တိုက်တွန်...
TSJ ရဲ့လက်ဆောင်ံ Harbert Casson ရဲ့ Efficiency စာအ...
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ တရားမဝင်ကြောင်း တရားရုံးဆုံးဖြတ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ၏ ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဖုန်းအား ပြန်လည...
အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ် The Elders အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး မြန်မာပြ...
ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် ရှာဖွေရေး Pentagon အကူအညီ လိုအပ်
ပုံတစ်ပုံကြောင့် ဘ၀ပြောင်းသွားတဲ့ အာကာကျော် နိုင်င...
မြန်မာ စပါးကြီးေ မြွတွေရဲ့ မှတ်ဉာဏ်